Nọmba Ndenye Blọgụ 1,000 - Na-ebi na Techpoint! | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 9, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nke a bụ ya! Blog post nọmba 1,000 - na-ebi site na Nzukọ Annual Techpoint Summit nke 10 na Indianapolis, IN. Nzuko teknụzụ na Indiana? N'ụzọ na-emegide onwe m, anọ m n'ọhịa ahịa ọtụtụ ọwa na-agwa olu okwu, email ahịa, na ụlọ ọrụ ịde blọgụ maka ahia yana ihe iwu kwadoro jikọtara nke ọ bụla.
N'ụzọ doro anya, Gọvanọ Mitch Daniels njakịrị banyere nke a kwa ụtụtụ mgbe a oké iwebata site David Baker, CEO nke Internetlọ akụ Internetntanetị izizi, na Ron Brumbarger, onye isi oche nke Ngwọta BitWise.
Otu n'ime ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya nke Gov. Daniels nyere bụ na ịmalite azụmaahịa na Indiana nwere oke mgbatị 20% na-akwụ ụgwọ na mbido mbido n'ihi ọnụ ahịa obibi, ihe ụtụ isi na ụgwọ ụgwọ ndị ọrụ kachasị ala na mba ahụ.
Maka ụlọ ọrụ ndị dabere na teknụzụ, Techpoint na gọọmentị steeti arụkwaala ọrụ iji mepụta Ego nke 21st Century yanakwa nnukwu onyinye nke ụtụ isi na ahịa ọhụụ ọhụrụ emere, nyocha na mmepe mmepe, yana onyinye ọrụ.
Ihe dị mma banyere Indiana bụ na ọnụahịa obibi ala dị ala na Indianapolis na-etinye ya na etiti ọdịda anyanwụ. Ọ bụrụ na ị ga - amalite azụmaahịa teknụzụ, nkezi ego nke 20% nwere ike ime ọdịiche dị n'etiti ohere ụlọ ọrụ gị maka ịlanarị na ikike ịsọ mpi na oghere.
Ngosipụta: Ana m arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ Ron na-enyere ndị ahịa ya aka na usoro mgbasa ozi mmekọrịta. Ron ji obi ọma kwụọ ụgwọ m n'ime ihe omume taa (ekele!). Ọzọkwa, ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ oge niile nwere obi ụtọ iji nweta David dịka onye na-etinye ego! Ma n’ezie, ekele dịrị onye isi m maka inye m ụbọchị ezumike!
Naanị ihe edeturu: Nọrọ na-ege ntị maka $ 1,000 Onyinye Efu na ememe nke 1,000 posts, 1,000 pụrụ iche ọbịa a ụbọchị, na 1,000 ndepụta ndị debanyere aha… woohoo! Anyị mere ya!
Tags: 10001000 postsIndianaIndiaihe omuma
Nov 9, 2007 na 4:08 PM
Ka m buru onye mbu (online) ikele gi! Chee echiche banyere ihe niile gbasara 1 na 0!
Nov 9, 2007 na 5:43 PM
Anụrụ m gị Doug. N’oge gara aga, ana m enweta ọtụtụ ozi ịntanetị na-ezighi ezi na-abanye na igbe mbata m. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ị kwuru maka ịgba akwụkwọ ndị isi. O nwere ike ime naanị otu n'ime ụbọchị ndị a.